ဝဲဘက် ထိပ်ဆုံးမှ စ၍: ပီထရိုနပ်စ် တာဝါစုံတွဲ၊ ပီတလင်း လမ်း၊ ဂျာမက် ဗလီ၊ ဂုံဘတ်မြစ်နှင့် ကလန်းမြစ် မြစ်ဆုံ ၊ အမျိုးသား အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ၊ အမျိုးသား ဗလီ၊ ကွာလာလမ်ပူ မြို့မြင်ကွင်း၊ အလယ် (ကေအယ်လ်တာဝါ) ၏ မြင်ကွင်းပုံ
၁၉၉၀ ခုနှစ်များမှ စ၍ ကွာလာလမ်ပူသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဓနသဟာယနိုင်ငံများ အားကစားပွဲနှင့် ဂရန်းပရီ ဖော်မြူလာဝမ်း အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အားကစားပွဲ၊ နိုင်ငံရေး ပွဲ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုပွဲ အမြောက်အများကို အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး အဆောက်အဦး နှစ်ခုတွဲ ဖြစ်သော ပီထရိုနပ်စ် တွင်တာဝါ တည်ရှိရာ နေရာဖြစ်ပြီး ထိုအဆောက်အဦးများမှာ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်တိုးတက်မှု အတွက် ပြယုဂ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဂုန်ဘတ်မြစ် (ဝဲ) နှင့် ကလန်းမြစ် (ယာတို့) ပေါင်းဆုံရာ နေရာတွင် ရှိသော ဂျာမက် ဗလီ။ ကွာလာလမ်ပူတွင် အစောဆုံး အခြေချ နေထိုင်ခြင်းမှာ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် ဖြစ်ပြီး ဤဓာတ်ပုံ၏ ညာဖက် အခြမ်း ဖြစ်သည်။
၁၈၆၀-ပြည့်နှစ်တွင် သံဖြူဈေးကောင်းလာ၍ ကွာလာလမ်ပူသည်လည်း ရွာကြီးတရွာ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး တရုတ်တွေလည်း ထောင်နှင့် ချီပြီးရောက်ရှိ လာခဲ့ပါသည်။ မလေးလူမျိုးက လူနည်းစုသာ ရှိပြီး တရုတ်များကဘဲ ကြီးစိုးထားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သတ္တုတွင်းသမား၊ ကုန်သည်၊ ဈေးရောင်းသူများ စည်ကားလာပြီး ပြည့်တန်စာ အိမ်တွေ၊ လောင်းကစားရုံတွေ၊ ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းတွေ ပြည့်လာခဲ့ ပါသည်။ ကွာလာလမ်ပူသည် ဆီလန်ဂေါ ပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိ၍ ထိုပြည်နယ်ကို အုပ်ချုပ်သော မလေးဘုရင်က ကွာလာလမ်ပူ အုပ်ချူပ်ရေးကို တရုတ် အကြီးအကဲများနှင့် လွှဲထားပြီး အခွန်လောက်ဘဲ ကောက်ခဲ့ ပါသည်။ ထိုအကြီးအကဲတွေထဲက ၁၈၆၈ ကနေ ၁၈၈၅ ထိအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ကြီး ယက်(ပ)အလွိုင် က ကွာလာလမ်ပူ ကိုမြို့ကြီးတမြို့ဖြစ်အောင် ထူထောင်ခဲ့ သူတဦး ဖြစ်ပါသည်။ ၁၈၆၇ မှာတော့ အခွန်ငွေ အကြီးအကျယ်ရနေတဲ့ ကွာလာလမ်ပူကို မလေးဘုရင်တွေ အချင်းချင်း လုရာက စစ်ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။ အဲဒီစစ်ပွဲ မှာ ယက်(ပ)အလွိုင် က ဆီ လန်ဂေါဘုရင်ခံ တဲန်ကူးကူးဒင် ကိုထောက်ခံခဲ့သော်လဲ ၁၈၇၂ စစ်အပြီးမှာ အရေးနိမ့်သွားတဲ့ အတွက် ကွာလာလမ်ပူဟာ ပြာပုံအတိဖြစ်သွားခဲ့ရပါသည်။ ဒါပေမယ့် ၁၈၇၃ မှာ စစ်ရှုံးဘုရင်ခံ တဲန်ကူးကူဒင် က ပါဟမ်းစူလတန် ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်လည် သိမ်းပိုက် ပြီး ယက်(ပ)အလွိုင် ကိုပြန်လည် အုပ်ချုပ်စေခဲ့ ပါသည်။ ပြာပုံ ဖြစ်နေတဲ့ ကွာလာလမ်ပူက နေထွက်ပြေးတော့မယ့် တရုတ်တွေကို ပြန်လည် စည်းရုံးပြီး မြို့ကို ပြန်လည် ထူထောင်ခဲ့ ပါသည်။ နောက် ငါးနှစ် အကြာမှာတော့ သံဖြူဈေးတွေ တက်လာခဲ့ပြီး ကွာလာလမ်ပူ ဟာ အရင်လို ပြန်လည်စည်ကား လာခဲ့ပါသည်။ ၁၈၇၉ မှာ ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ် သံအဖွဲ့ အခြေချ ခဲ့ရာက နေ ၁၈၈ဝ မှာ ဆီလန်ဂေါပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် ဖြစ် လာခဲ့ပါသည်။
Malaysia: largest cities and towns and statistics of their population။ 16 December 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
Helders, Stefan။ Malaysia:Metropolitan areas။ World Gazetteer။5December 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4December 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Putrajaya – Administrative Capital of Malaysia။ Government of Malaysia။ 21 October 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 December 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kearney, Inc.၊ A.T.။ The 2010 Global Cities Index။ Foreign Policy။
Print! Email! Author: 2thinknow (1 September 2010)။ Innovation Cities™ Top 100 Index | 2010 | Innovation Cities Program – Analyst Reports, Index Rankings, Benchmarking Data, Workshops။ Innovation-cities.com။ 14 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Territorial extent။ States of Malaysia။ statoids.com။ 11 December 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
JM Gullick (1955). "Kuala Lumpur 1880-1895". Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society 24 (4): 10–11.
J.M. Gullick (1983)။ The Story of Kuala Lumpur, 1857-1939။ Eastern Universities Press (M)။ pp. 8–9။ ISBN 978-9679080285။
Kuala Lumpur History။ All Malaysia။ 18 October 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 September 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။